विश्वकप बिशेष « नेपाली मुटु
Archive for the ‘विश्वकप बिशेष’ Category
विश्वकप : कसले के जित्यो ?
विश्वकप फुटबलको १९ औ संस्करण आयोजना गर्न जब दक्षिण अफ्रिकालाई जिम्मेवारी दिइयो तब धेरैले फिफाको आलोचनात्मक समर्थन गरेको कुराले विश्वस्तरमा चर्चा पायो । तर विश्वकपको यो संस्करण सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको छ । यसको जस फिफा र दक्षिण अफ्रिकालाई नदिरहन सकिदैन । एकदमै तामझाम साथ गरिएको समापन कार्यक्रममा अफ्रिकाको संस्कृती र विकाश दुबै देख्न पाइयो । तिनीहरुको संस्कृति हेरिरहदा मैले पनि मनमनमा विश्वकपको समापनको दिन मैदानमा हजारौको उपस्थितीमा सनाइ, मादल र लोकगीतका बाजा बजेको कल्पना गरिरहेथें । तपाईले पनि त हेर्नु भयो होला नी, तपाईलाई चाँही कस्तो लाग्यो ? यही विश्वकपमा निकै खेलाडीको भाग्य चम्किएको छ । यस मध्ये आधिकारिक रुपमा कसले के अवार्ड पाए त ? Continue Reading विश्वकप : कसले के जित्यो ? >>
एक महिना देखि दक्षिण अफ्रिकामा चलिरहेको फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप स्पेनको जितसँगै सकिएको छ । विश्वकपको १९ औ संस्करण सम्म आइपुग्दा स्पेनले पहिलो पटक विश्वकप माथि कब्जा जमाएको हो । यो सँगै विश्वकप जित्ने स्पेन आठौ मुलुक भएको छ । समुह चरणको खेलमा स्विट्जरल्याण्डसँग एक गोलले पराजित स्पेनले अपराजित नेदरल्याण्डसँग अन्तिम खेलमा १–० को कठिन जित हाशिल गरेको हो । Continue Reading विश्वविजेता बन्यो स्पेन >>
विश्वकपको दाबेदार मानिएको जर्मनीले विश्वकपको यो संस्करणमा धेरै आश्चर्य जनक नतिजा दिए पनि विश्वकपको दौडमा स्पेनसँग हारे पछि उ पछि प¥यो । तर तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा उरुग्वे विरुद्ध ३–२ को जित हात पारेर जर्मनीले सान्तवना जित हाशिल गरेको छ । यो सँगै अक्टोपसको सातौं भविष्यवाणी पनि मिल्न गएको छ। अक्टोपसले यस बिश्वकपमा जर्मनी तेस्रो हुने भविष्यवाणी गरेको थियो । Continue Reading जर्मनीलाई सान्तवना जित >>
अफ्रिकामा पहिलो पटक भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि अहिलेसम्म उपाधि नजितेको टिमले जितेर नयाँ इतिहास रच्ने पक्का भएको छ। जर्मनी र स्पेनबीचको अहिले भर्खर सकिएको सेमी फाइनल खेलमा जर्मनीलाई १-०ले हराएपछि स्पेन र नेदरल्यान्डसबीच उपाधिका लागि भिडन्त हुने भएको हो। यी दुवै युरोपेली टिमले अहिलेसम्म विश्वकप जितेका छैनन्। स्पेन पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो भने डच टिम ७० को दशकमा दुई पटक फाइनलमा पुगेर पनि उपाधिविहीन भएको हो। क्वार्टर फाइनलका खेलहरुदेखि नै स्पेन र नेदरल्यान्ड्सबीच फाइनल होस् भन्ने मेरो चाहना र आशा व्यक्त गर्दा कतिले खिसी गरेका थिए। यस पटक इटाली, फ्रान्स, ब्राजिल, अर्जेन्टना, जर्मनी लगायत सबै परम्परागत टिम पाखा लागे र अन्ततः यी दुवै टिमबीच नै फाइनल हुने भो। Continue Reading नयाँ इतिहासको रचना >>
उरुग्वेलाई पछार्दै नेदरल्याण्डस फाइनलमा
Posted by नेपाली मुटु on July 7, 2010
जित्नुको मज्जा नै बेग्लै
समुह चरणको सबै खेल जितेर समुह च्याम्पियन बनेर अर्को चरणमा प्रवेश गरेको नेदरल्याण्डसले विजयी अभियान चालु राखेको छ । युरोपियन महारथी नेदरल्याण्डस पहिलो सेमीफाइनलमा दक्षिण अमेरिकी टोली उरुग्वेलाई ३–२ ले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । यस अघि विश्वकपका दुइ संस्करणमा फाईनलमा पुगेको नेदरल्याण्डसले उपाधी हाशिल गर्न सकेको छैन । नेदरल्याण्डस विश्वकप १९७४ र १९७८ मा फाइनलमा पुगेको थियो । Continue Reading उरुग्वेलाई पछार्दै नेदरल्याण्डस फाइनलमा >>
दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको १९ औं बिश्व कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलमा स्पेनले पाराग्वेलाइ एकमात्र गोलले पराजित गरेको छ। अब स्पेनले सेमीफाइनलमा जर्मनीसंग भीड्ने छ। स्पेनले १९५० पछी अहिले सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। Continue Reading सेमिफाइनलमा युरोपियन बर्चश्व/स्पेन पनि सेमीमा >>
सपना जस्तो पारिदियो यसपालीको विश्वकप अर्जेन्टिनाले । विश्वकपको सुरुवात देखि नै अर्जेन्टिनाले जित्छ भनेर विश्वकप हेरिरहेका म जस्ता अर्जेन्टिनाका फ्यानहरुलाई आजको नतिजा पत्याउँन नै गा¥हो भईरहेको छ । आजको खेललाई फाइनल जस्तो मानेर हेर्नेको संख्या साँच्चै नै कम थिएन होला । मैले पनि त्यस्तै सोचेर अर्जेन्टिना र खास गरि मेस्सीको चमत्कार हेर्न बसेको थिए । तर चमत्कार त जर्मनीले पो देखाईदियो । पत्याउँनै नसकिने, सपना जस्तो नतिजा आयो ० का बिरुद्ध ४ को ।
गुडबाई अर्जेन्टिना !!!!
खेल हेर्दा लाग्थ्यो अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरु खाली संख्या पु¥याउँन मात्रै मैदानमा आएका हुन् ।नठाटी एकै शब्दमा भन्दा लाजै भयो नि । तपाईलाई चै कस्तो लाग्यो त ? Continue Reading के रे, अर्जेन्टिना बाहिरियो रे ? >>
खेलको शुरूमा उरूग्वे घानामाथी हावी भएको थियो। तर तालमेलको अभावमा उरूग्वेले कुनै फाइदा उठाउन सकेन। घानाले बिस्तारै यसको फाइदा उठाउँदै सटिक पासको सहायताले उरूग्वे माथी डरलाग्दा आक्रमणहरू गर्न थाल्यो। उरूग्वेको शक्तिशाली रक्षापंक्तीलाइ भेड्न घानालाइ निकै कुश्किल परेको थियो तर मध्यान्तरको ठिक अगाडी घानाका मून्तरीले ३५ गज टाढाबाट उतकृष्ट गोल प्रहार गरेका थिए। Continue Reading यो विश्वकपकै कठिन खेल, के भयो टाइब्रेकरमा >>
आज भएको खेलमा ब्राजिल युरोपेली मुलुक नेदरल्याण्डसँग 2-1 ले पराजित भएको छ । कति ब्राजिल मात्रले जित्नु नयाँ र राम्रो खेल्ने पनि खेल जित्नु पर्छ भन्ने ठानेर मैले नेदरल्याण्डको पक्ष लिएर खेल हेरे । तर ब्राजिलको जितमा रमाउँन बसेकाहरुको खुसी पहिलो हार्फ भरि नै उत्सकर्षमा थियो । Continue Reading जोगाएन साख ‘नम्बर एक’ ले >>